Banyere Anyị - Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 2009, ya na isi ụlọ ọrụ dị na Suzhou City, China, Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepụta ihe na-enye ngwọta nchịkwa ihu igwe maka ime ụlọ / n'èzí Cabinet, Battery Energy Storage System, Data Center na Cold Chain Logistics, wdg BlackShields. raara onwe ya nye inyere ndị ahịa anyị aka gụnyere Telecom, Grid Power, Finace, Energy Renewable, Transportation na Automation ụlọ ọrụ na-edebe ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ akụrụngwa.
BlackShields gafere ISO9001 Quality Management System asambodo, ISO14001 Environmental Management System Certification na ISO45001 Occupational Health and Safety Management System asambodo ma nwee ike ịnye ngwaahịa na CE, TUV na UL nkwado, wdg dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Site na otu injinia siri ike gụnyere imewe ọkụ na ndị injinia na-ahụ maka ọkụ eletrik, BlackShields nwere ike chepụta ngwaahịa njikwa ihu igwe nwere njikwa ahaziri maka sọftụwia na ngwaike dabara adaba.
Dịka ogbako nwere ọgụgụ isi, BlackShields na-ewulite ahịrị mgbakọ akpaka maka ngwaahịa njikwa ihu igwe na sistemụ akara koodu mmanya. Ngwaahịa niile nke BlackShields nwere ike ịchọ site na koodu mmanya iji kwalite ogo na ọrụ.
BlackShields nyekwara RMB240 nde iji wuo ụlọ ọrụ ọhụrụ nke na-ekpuchi ihe dị ka square mita 27,000 na 2020. A ga-arụcha ụlọ ahụ na Aug, 2021 na ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-amalite ọrụ na Oct, 2021. A ga-abawanye ahịrị mgbakọ na akụrụngwa nnwale maka otu. ọzọ nwere ọgụgụ isi factory.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ BlackShields:
• Dynamic R&D otu nwere elu R&D ngwá ọrụ na ule ụlọ nyocha, dị iche iche patents na maara otú ọrụ maka elu ịrụ ọrụ nke ọma Climate njikwa ngwọta.
• Lekwasị anya na arịrịọ ndị ahịa, zute ihe achọrọ ahaziri ahazi ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi
• Usoro ikpo okwu na akụrụngwa ọkọlọtọ, ọnụ ala na obere oge ụzọ maka ngwaahịa
• Otu ụlọ ahịa nkwụsị nwere ahịrị ngwaahịa dị iche iche maka ngụkọta njikwa ihu igwe, ike jụrụ oyi na-ekpuchi 200W ~ 200KW
• Ụlọ ọrụ ọgụgụ isi maka imepụta ya na sistemụ njikwa ogo siri ike
• Ahụmahụ nke imepụta> 1 nde PC ngwaahịa njikwa ihu igwe maka ahịa ụwa
Album ụlọ ọrụ
Ụlọ nyocha 7.5kW
Ụlọ nyocha 180kW
Ahịrị Mgbakọ akpaaka
Ụlọ nyocha mkpọtụ
Chamer maka components
Ndepụta ndị mmekọ na ndị ahịa